Yini Ongayibuka kuDisney Plus? Ama-movie wokugcina nemibukiso ye-TV - Ezokuzijabulisa
I-Disney plus ibingumuntu othatha ithuba emhlabeni wezithombe nezithombe zopopayi. Ukucaciswa kwayo okuphezulu nekhwalithi yekhwalithi enezakhiwo ezikhangayo nezokuziphatha zama-movie nezinhlelo ze-TV sekwenze iDisney yaba elinye lamapulatifomu ahamba phambili kwezokuzijabulisa. Kepha njengoba kunemibukiso eminingi ye-TV nama-movie acishe abe nazo zonke izinhlobo zezinhlobo ezitholakala I-Disney Plus , ungahle ucasuke ngokuthi yini okufanele uyibuke kuDisney Plus.
Ngakho-ke, lapha size ukukusiza ngezimpendulo ezinhle kakhulu zokukwazisa ngokuhle nokubalulekile ukubukela imidlalo ye-TV nama-movie kuDisney plus.
Amabhayisikobho ambalwa akalwa phezulu kangangokuba wonke umuntu uyazi ngawo, futhi kuba lula kancane ukunquma uhlelo lwempelasonto lokubuka i-movie enhle. Kodwa akwenzeki ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi udidekile phakathi kwama-movie amaningi bese ugcina ubuke umbukiso noma i-movie engakufanele ukubukwa.
Kwesinye isikhathi uhlelo luhle futhi ne-movie nayo, kepha ayikwazi ukufana nohlobo lwenambitheko owabelana ngayo kumamuvi nakuzinhlelo ze-TV. Ngakho-ke siqoqe ifayela le- uhlu lwama-movie amahle kakhulu nemibukiso ye-tv ozoyibuka ku-Disney plus.
Uhlu lwama-Movie ahamba phambili we-13 nemibukiso ye-TV ongayibuka ku-Disney Plus:
ISimpsons ingenye yemidlalo ye-TV ebukwa kakhulu ku-Disney plus. Inezindikimba ezinhle kakhulu zobuhlakani, ezokuzijabulisa, namahlaya.
Kube ngomunye wemidlalo ye-TV enesilinganiso esiphakeme kakhulu, ngakho-ke uma umusha emhlabeni weDisney, khona-ke lokhu kufanele kube ngowokuqala ohlwini lwakho okufanele ulubuke.
2. U-Elena wase-Avalor
U-Elena ungowenkosazana yesimanje ye-Disney ekalwe kakhulu. Unombuso afuna ukuwubusa ngomusa nangokuthula, kepha ubhekana nawo nobunzima abhekene nabo kungenzeka bungakwazi.
U-Elena ungumlingiswa oguquguqukayo. Uyiqhawe, ungumholi, futhi uyindodakazi yenkosi esefashinini enewodilophu yakhelwe kahle. Ukubuka u-Elena we-Avalor kuhlale kufanelekile ukubukwa.
3. I-Incredible Hulk
Ingenye yochungechunge lwezenzo ezibaluleke kakhulu ku-Disney plus. Leli qhawe lifana kakhulu namanye amaqhawe esenzo adumile njenge-iron man.
Imibukiso ibinezinkathi ezimbili, futhi zombili ziyajabulisa ukuzibuka.
4. UTimon noPumba
Abalingiswa baseTimon nasePumba bayathandeka kakhulu. Banenkinga ethile encane phakathi nohambo lwabo oludabula ehlathini.
Kepha lonke uchungechunge lukusebenzela ngesipiliyoni esijabulisayo nesijabulisayo.
5. Indoda Ehlakaniphile
Imayelana nendaba yengane eneminyaka eyishumi ehlakaniphe ngokweqile. Ulwela ukuphatha ngokuhlakanipha kwakhe okukhulu emhlabeni wezinkinga nabantu abadala abacasulayo.
Ngakho-ke, ukubuka umuntu ohlakaniphile kungakhuthaza ukuzijabulisa okushukumisayo kakhulu ukuba nakho.
6. Amandla eGravity Falls
Amawele amabili ayizihola phambili. Bahlose ukuhlela iholide edolobheni lase-Oregon elaziwa ngokuthi yi-gravity falls. Bathola izenzakalo ezimangazayo nezingajwayelekile lapho.
7. AmaPirates aseCaribbean
Abaphangi beCaribbean banezingxenye eziningi. Kuyathakazelisa ukubuka njengoba benesasasa, isenzo, ukungabaza, nokuthandana okuncane.
Ingenye yama-movie athandwa kakhulu ongawabuka ku-Disney plus. Indaba izungeza amaqembu noma amaqembu ezigelekeqe asemishini ehlukahlukene ukuyifeza.
8. Indaba Yamathoyizi
Indaba yamathoyizi yi-movie ethokozisayo futhi ethandwayo. Inezingxenye eziningi, futhi ngayinye yazo inesakhiwo esihle ngokumayelana nesixazululo sodweshu olumangazayo.
Yaqala ukukhishwa ngo-1995, manje isiqhamuke nengxenye yesine njenge-Toy Story 4 ngonyaka ka-2019.
I-mermaid encane yindaba ye-mermaid yasolwandle enhle. Indaba iqhubeka nesivumelwano asenzayo nomthakathi olwandle ukuhlangana nenkosana yomuntu njengoba wayethandana nayo.
Kuyimfashini phakathi kwabathandi beDisney, ikakhulukazi amantombazane.
10. Shada amaPoppin
Ukushada ama-Poppins kungenye yezinhlamvu ezijabulisa kakhulu nezithandwayo zeDisney plus. Indaba imayelana nowesilisa owaziwa njengoMnu. Banks, ethungatha umzanyana wezingane zakhe ezimbili. Ngakho-ke, uhlangana nowesifazane onozwela uMarry Poppins, futhi ubeka ithoni entsha yothando nenjabulo kubo bonke abantu abaku-movie.
Kuyafaneleka ukubukwa hhayi kuphela ngoba kunesakhiwo esihle kakhulu, kepha futhi ngoba umuntu angafunda kumlingiswa ongavamile weMarry Poppins.
11.Avengers End Game
Cishe wonke umuntu uyazi ngama-Avengers, futhi ingxenye yawo yokugcina Umdlalo we-Avengers End ubukelwa umhlaba wonke futhi ukalwe njengokukhishwa okuphezulu kuka-2019.
Umdlalo wokugcina wabaphindiseli uzungeze umqondo wokuthi bonke abaphindiseli kufanele bahlangane ukuze basindise ubuntu.
12. Ngubani Obefreyimu URoger Rabbit
Kukhona umlingiswa kaToon Roger. Uyangabaza ngomkakhe ukuthi angahle ahlangane nomunye umlingiswa uMarvin. Ngakho-ke, unquma ukuthi kufanele aqashe umphenyi walolu daba kumkakhe noMarvin.
Kodwa-ke uMarvin utholakala efile, futhi uthola icala lokubulawa kwakhe.
13. Umsindo Womculo
Kuyindaba efudumele kakhulu esuselwa empilweni yangempela yeVonn Trapp Family Singers. Kubukwe kakhulu, futhi abagxeki babenezibuyekezo ezinhle kakhulu kulokhu kukhishwa okuhle kakhulu.
IDisney Plus ngomunye wemithombo ebalulekile futhi esabalele yomthombo ojabulisayo wokuzijabulisa. Inezinhlobo eziningi lapho kunemibukiso yama-movie ehlukile futhi ethokozisayo.
Kwesinye isikhathi kuba nzima ukuzisula mayelana nokuthi yini okufanele uyibuke ku-Disney plus. Uhlu olungenhla luhlanganiswe ngemuva kocwaningo oluningiliziwe mayelana nemibukiso ehamba phambili ongayibuka kwiDisney Plus ukuze ube nesipiliyoni esibushelelezi nesijabulisayo.
Yini Ongayibuka ku-Hulu? Iqoqo Lokugcina